Kukwira Kwemuzambiringa | Martech Zone
Svondo, Kukadzi 16, 2014 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
anouya yakavhurwa gore rapfuura uye yakave nebudiriro yakati wandei. Funga nezveMuzambiringa sevhidhiyo vhezheni ye Twitter, kwaunonyora mapfupi mavhidhiyo uye woaisa. Hazvishamise kuti Twitter yakatenga Vine uye yakasanganiswa ichitamba mavhidhiyo kubva kuTwitter uye ipapo kunyorera. Paunenge uchishandisa iyo app, iyo kamera inorekodha chete apo iyo skrini iri kubatwa, ichikubvumidza iwe kuti uite mamwe maifidhi mavhidhiyo.
Heano muenzaniso wekuti vashambadzi vari kushandisa sei Vine:
Pamwe pamwe neiyo infographic, Tamba akanyora chinyorwa pa nei kukura kweMuzambiringa kuchifanira kufarira vatengesi. Ivo vanosanganisira inonakidza stat - zvinoenderana neUnrulymedia, yakashongedzwa Miti yemizambiringa ine mikana mina yekugovewa pane akajairwa mazita emavhidhiyo. Chiratidzo chako chiri paVine here?
Tags: MarketingKushambadzira Vhidhiyokutengeswa kwemuzambiringamuzambiringa twitter
Chingori musoro chete: Mavara haana kurongeka zvakanaka. Hapana nzvimbo pakati pemazwi.